‘डन’हरूको राजनीतिक अवतरण : सत्ता न प्रतिपक्ष सबै जुठा ! « BBCeonlinenews
काठमाडौं, १९ असार । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङे निर्दलीय थिए । त्यसअघि मनाङ ‘ख’को उम्मेदवार हुँदा तत्कालिन बाम गठजोड (नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र)ले आधिकारीक उम्मेदवार बनाउने तयारी भएको थियो ।
अदालतमा अनेक मुद्दा प्रकरणमा उनको नाम मुछिएपछि चुनाव गुमाउने डरले तत्कालिन कम्युनिस्ट गठजोडले. मनाङेलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनावको रिङबाट आउट गर्ने निर्णय लियो । तर, परोक्ष रूपमा सघाएको थियो । त्यसको नतिजा बुधबार उनले नेकपा प्रवेश गरी पुष्टि गरे । उनले आफू तीनपटक नेकपामा छिरेको पनि बताइसकेका छन् ।
त्यसअघि उनी नेपाली कांग्रेस, जनजाती मोर्चाको पार्टीलगायतमा आवद्ध त थिए नै । तर, गुरुङको परिचय भने ‘डन’का रूपमा स्थापित भएको थियो । राजधानीको ठमेललगायतका क्षेत्रमा उनको गुन्डागर्दीको चर्चा र हत्कण्डा कम थिएनन् । यद्यपि, आफूलाई प्रहरीले डन भनी घोषणा गरेको उनको जिकिर रहँदै आएको छ । सत्यचाहिँ ओपन सेक्रेट नै छ ।
राजनीतिक दलका नेतासँगको सम्बन्ध, स्वीकार्यताका कारण गुरुङ जस्ता धेरैले अवतरण गर्ने मौका पाएका छन् । राजनीतिक अवतरण गरेका उनीहरूको छविमा कति सुधार आउला त्यो समयले बताउने छ । तर, यसरी खराब छवि बनाएकालाई राजनीतिमा ‘स्पेश’ दिन के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष कोही चुकेका छै्रनन् ।
डन भनेरै परिचय स्थापित गरेका गणेश लामालाई नेपाली कांग्रेसले काभ्रे जिल्लाको प्रदेश सभामा टिकट दिएको थियो । उनी नेकपाका चन्द्र लामासँग पराजित भए । यद्यपि, राजनीतिक रूपमा उनले आफूलाई स्थापित गराउने कोशीश गरिरहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा उपसभापति विजयकुमार गच्छादारनिकट छन्, लामा । उनको पनि गुरुङको जस्तै प्रस्टोक्ति छ– प्रहरीले डन बनायो । अघिल्लो बर्षमात्र उनलाई हातहतियार खरखजानाको मुद्दा प्रहरीले चलाएको थियो ।
सत्ताको केन्द्रविन्दुमा आलोपालो गरिरहेका नेकपा र कांग्रेसमै गुन्डा नाइके अथवा डनको छवि बनाएका व्यक्तिको राजनीतिक अवतरण भइरहेको छ । किन यस्तो हुन्छ ? एक जना पूर्व प्रहरी नायव महानिरिक्षक भन्छन्,‘सुरक्षित हुनका लागि उनीहरूले शक्तिशाली राजनीतिक दललाई रिझाउने गरेका छन् । अहिलेका कतिपय नेताको अनुहार हेर्ने हो भने पहिलाका गुन्डा नाइके नै देखिन्छन् ।’
त्यसो त राजनीतिक आस्था र संगठनमा रहेका कतिपय गुन्डा नाइकेको प्रहरीले इन्काउन्टर नै गरेको थियो । आपराधिक पृष्ठभूमीमा रहेका तर राजनीतिक अवतरणमा जुटेकालेचाहिँ पदीय हैसियत पनि पाएका छन् । दिनेश अधिकारी चरी तत्कालिन नेकपा एमालेको धादिङको क्षेत्रीय कमिटीमा थिए । उनी युवा संघ नेपालसँग पनि आवद्धता जनाउँथे । तर उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रमूख रहँदा हालका एआइजी पुष्कर कार्कीको निर्देशनमा प्रहरी टोलीले इन्काउन्टर गरेको थियो । मनोज घर्तीमगर अथवा अन्य जो कोही होस्, मारिएकाहरूको आवद्धता ठूलै राजनीतिक दलमा देखिन्छ ।
‘हप्ता उठाउने, अपराधमा सक्रिय रहने, चन्दा उठाउनेलगायतका काममा संलग्न कतिपय अहिले पनि सत्ता र प्रतिपक्षसँग संगठित छन् । तिनको फाइल उल्टाएर हेर्ने हो भने कारबाही गर्न सकिने अवस्था पनि छ’, ति पूर्व नायव महानिरिक्षक भन्छन्,‘तर शक्ति केन्द्रको आड, नेताको आदेशका आधारमा प्रहरीले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । अर्को, अदालतसँगको पनि मिलोमतोमा उनीहरू बाहिर खुलेआम देखिन्छन् ।’
उल्लेखित पात्र प्रवित्तिका प्रतिनिधि मात्र हुन् । यी बाहेक सयौंको संख्यामा उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा रहेका व्यक्ति राजनीतिक दलमा संगठित छन् । जसविरुद्ध ग्याङ फाइट, गोली चलाएको, चन्दा उठाएको, व्यापारी धम्क्याएकोलगायतका अनेक अभियोग लागेका थिए । एक जना प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक भन्छन्,‘सत्ता होस् या प्रतिपक्ष जसले राजनीतिमा प्रभाव राख्ने र प्रशासनलाई आदेश दिने हैसियत राख्छन् ति नेताको वरिपरि यस्ता व्यक्तिको हालीमुहाली छ । हामी हेर्न मात्र सक्छौं, कुनै मौका विशेषमा मात्र कारबाही गर्न सकिने हो । नत्र उनीहरू नै ताकतवर देखिन्छन् ।’
उनको तर्कका आधारमा जसले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि सामाजिक अपराधमा संलग्न रहेकालाई संरक्षण दिने कुरामा सबै जुठा छन्, चोखा कोही पनि छैनन् । कतिपय त बमदेखि हत्या काण्डमा अहिले पनि जेल सजाय भोगीरहेका छन्, जसले केन्द्रीय सत्तामा मनोनितको स्थान नै पाएका थिए । ति मध्येका एक हुन्, सञ्जय साह टक्ला । ति अधिकारी थप्छन्,‘जसको प्रभावकारी राजनीतिक दलमा आवद्धता छैन र अपराध गम्भिर छ, त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा तान्न सकिएको छ । तर, जसमाथि शक्तिशाली नेताको हात छ, तिनलाई कारबाहीको लागि प्रहरीले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’
अहिले राजनीतिमा सक्रिय देखिएका गुरुङ, लामा हुन् अथवा नेकपाप्रति बढि झुकाव राख्ने मिलन गुरुङ चक्रे, युवा संघ उपाध्यक्ष पर्शुराम बस्नेत, कांग्रेसमा झुकाव राख्ने तर जेलमा रहेका अभिषेक गिरी सबैलाई प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाएको पनि थियो । तर, राजनीतिक आड बल र प्रशासनिक बलमिच्याँईका भरमा उनीहरू बाहिर सक्रिय छन् । जसलाई नेपाल प्रहरीले कहिले पनि गतिला मान्छे भन्ने सूचीमाचाहिँ राखेको छैन । प्रहरी स्रोत भन्छ,‘हर कसैको रेकर्ड छ । राजनीतिमा देखिने नदेखिने धेरैको फाइलको ढड्डा प्रहरीले राखेको छ । हात खुलेको दिन, उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया पनि बढ्छ ।’
नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध रहेका तर इन्काउन्टरमा मारिएका कुमार श्रेष्ठ घैंटे काण्डबारे जानकारी एक जना प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘त्यो इन्काउन्टरपछि पनि प्रहरीले निक्कै दबाब खेप्यो । तत्कालिन समयमा नेपाली कांग्रेसका नेताले सदनमा नै प्रहरीविरुद्ध बोले । तर, घैंटेले गरेका अपराध र उसले मच्चाएको अपराधलिलाका विषयमा को बोल्यो ?’
प्रहरीले काम गर्न खोजे पनि त्यसमा राजनीतिक दाउपेच हुने र कतिपयले राजनीतिक रूपमा नै स्थापित भएर प्रहरीलाई देखाइदिन्छु भन्नेसम्मका चेतावनीको चेपुवामा पारेको अनुभव कतिपय अधिकारीसँग रहेको छ । उनीहरू भन्छन्,‘राजनीति सफा भइदिए समाज पनि सफा हुन्छ । तर राजनीतिले त प्रहरी नै फोहोरी बनाउन थालिसकेको अनुभूति हुन्छ ।’